Medical Engineering - Luoyang esorowo Tungsten-Molybdenum Ihe Co., Ltd.
N'ihi na ha X-ray ngwá na kọmputa tomographs, na ngwaọrụ ụlọọgwụ emepụta ebe ha tụkwasịrị anyị anyịnya anodes na X-ray zaa mere nke TZM, MHC, tungsten-rhenium alloys na tungsten-ọla kọpa. Anyị tube na detector mmiri, n'ihi na ihe atụ n'ụdị rotors, ịgba mmiri, cathode mgbakọ, emitters CT collimators na shieldings, bụ ugbu a a guzosie ike akụkụ nke oge a Onyonyo achọpụta ọrịa technology.
X-ray radieshon na-adị mgbe electrons na-decelerated na anode. Otú ọ dị, 99% nke input ike converted n'ime okpomọkụ. Anyị ọla nwere ike idi ihe okpomọkụ ma hụ na a pụrụ ịdabere na thermal management n'ime X-ray usoro.
n ubi nke Radiotherapy anyị aka na mgbake nke ọtụtụ iri puku ndị ọrịa. Ebe a, zuru nkenke na nkwụsi quality dị oké mkpa. Anyị multileaf collimators na shieldings mere si karịsịa na ok tungsten-arọ metal alloy Densimet® adịghị ahapụ a millimeter a ebumnuche. Ha hụ na ụzarị ọkụ na-lekwasịrị anya n'ụzọ dị otú ahụ na ọ dara na ọrịa anụ ahụ na pinpoint ziri ezi. Etuto ahụ na-gụrụ elu-nkenke irradiation mgbe ike anụ ahụ na-anọgide na-echebe.
Mgbe ọ na-abịa mmadụ ọdịmma, na-amasị anyị na-na-achịkwa. Anyị mmepụta yinye anaghị amalite na ịzụta nke metal ma na Mbelata nke akụrụngwa na-etolite metal ntụ ntụ. Naanị otú a ka anyị nwere ike nweta ihe ndị dị elu na ihe onwunwe na-adị ọcha na ihe e ji mara anyị na. Anyị na-Nlụpụta kọmpat dara mmiri si porous powder blanks. Iji pụrụ iche-akpụ Filiks na n'ibu nhazi nzọụkwụ, nakwa dị ka ala-nke-na-art mkpuchi na isonye teknụzụ, anyị na-atụgharị ndị a n'ime mgbagwoju mmiri nke kacha performanceand àgwà.
Molybdenum, Molybdenum mpempe akwụkwọ, Molybdenum efere, Tzm Sheet, Tzm Plate, Molybdenum Rod,